Idizayini Entsha Ngokumangazayo Ye-imeyili (Iyadingeka) | Martech Zone
Idizayini Entsha Ngokumangazayo Ye-imeyili (Iyadingeka)
NgoLwesithathu, Juni 25, 2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Nayi enye i-imeyili engithanda ukuyithola, kepha imvamisa ungenzi lutho ngayo! Le yi IDowntown Indianapolis, i-imeyili Entsha Ngokumangazayo.
Ngihlala ngibhalisile ngoba ngithemba ukuthi kuzovela idizayini entsha - imininingwane ku khuthaza idolobha lase-Indianapolis konke kukhona, kepha ukwakheka kwenza i-imeyili ingafundeki futhi ingasebenziseki. Nakhu ukuthi kungani:
Akukho sixhumanisi esiyinhloko kulwazi lwekhanda kuwebhusayithi yangempela ye- I-Indy Downtown Inc. Mhlawumbe lokho kungukuqapha, kepha ngicabanga ukuthi kuyakudinga ngempela.
Izithombe ezikunhlokweni zincane futhi azinamsebenzi - angikwazi nokuzenza. Ukuqagela kwami ​​ukuthi noma ngubani odale i-imeyili unesinqumo esincane kakhulu kunami ngenze njalo mhlawumbe abukeka emakhulu. Bathatha isikhala esibalulekile 'ngenhla kwesibaya'… isikhala abantu empeleni can bona lapho bevula i-imeyili kumakhasimende abo.
Isigaba sokuqala ngakwesobunxele, Izwi elivela ku-IDI, yisihloko esibi futhi asiphoqi. Mhlawumbe abantu abazi nokuthi yini i-IDI?
Usayizi wefonti mncane, awufundeki, futhi awunamakhefu ezigaba noma izinhlamvu zokuvumela amehlo ami ukuthi ahlole okuqukethwe. Ngenxa yalokho, angizange ngiyifunde! Lesi sithombe bekuyikholi enkulu, noma!
Imicimbi yekhalenda kungenzeka ukuthi iyinto enhle kakhulu ngale imeyili, kepha akukho okubizelwa esenzakalweni ngemicimbi… nginike isixhumanisi sokuthenga amathikithi futhi ngithole imininingwane eminingi ngomcimbi ngamunye ukuze ngikwazi ukuya! Angizukubona umcimbi lapha bese ngiyozama ukuwusesha ku-Google. Anginaso isikhathi salokho!
Okuqukethwe kufohloziwe futhi kusikwe ngamakholamu amancane ngokungadingekile. Abantu baseziqapheleni ezinkulu kakhulu manje ngezinqumo ezibanzi… hamba kufomethi ebanzi yamaphikseli angama-800 kuye kwayi-1000. Njengoba ikhalenda lakho liyibha eseceleni engakwesokudla, umsebenzisi ngeke anake ukuskrola ngokuvundlile ukuze afinyelele kubha eseceleni bese eyifunda.
Kudingeka okungenani kube nekholi eyodwa ecindezelayo yokwenza okuthile ku-imeyili. Ngabe ufuna ngivakashele iMakethe Yasedolobheni? Thenga ithikithi lekhonsathi? Nginikeze isenzo esisodwa esiyingqayizivele sokuthatha isenzo kunokukhetha okungama-40. Ngitshele okuningi ngento eyodwa kunabo bonke abanye abazongishayela lapho.
Faka amakhasi okufika nezingcaphuno uma ukhathazekile ngegumbi. Bhala isicashunwa esifushane ngesixhumanisi 'sendaba ephelele' esingiletha ekhasini elinegumbi lokuphefumula nolwazi olungeziwe.
Ziphi izithombe zabantu? Ukungabi nezithombe zabantu abamomothekayo kule imeyili kungenza ngizizwe sengathi ngifunda incwajana noma udaba lwezindaba. Izithombe zabantu abajabulela le micimbi nezindawo ezisenkabeni yedolobha i-Indy zizoxhumana nami.
Kwenzekeni ngesonto eledlule? Kuthiwani ngokuphindaphinda okuhle komcimbi noma ibhizinisi olithuthukisile ku-imeyili namanye amazwana avela kubafundi mayelana nokuthi babe nesikhathi esihle kanjani. Kwenze kube ngokwakho!
Iphuzu lami akukhona ukugxibha le imeyili. Njengoba ngishilo, igcwele imininingwane enhle… mhlawumbe ngokweqile! Kuyacaca ukuthi abantu ababhale ikhophi benze umsebenzi wabo wesikole - kudinga nje ukwethula okungcono ukuze abafundi bakudle futhi bakwenze.
Tags: amaphuzu wekhwalithi ye-adwordsisilinganiso sekhwalithi ye-google adwordsi-htaccessnokwenza kahle kwe-logoizincazelo zeselulaokungezona wwwizinga lekhwalithiSocial Media Marketingukuthuthukisa i-websitewww
Vuselelwa kumaCisco I-Prize Finals
Ukuhlola Ubuholi nge-Telecommuting
Jun 25, 2008 ku-7: 32 PM
Ukube bengingabaqambi / ababhali be-imeyili bengingachaza. usike ikhophi okungenani nge-1/2. Ungaxhumanisa ama-athikili athile nelinye ikhasi lokuqukethwe.
Indlela yokukopisha okuningi nge-imeyili.